သက်တန့်ချို: ထူးဆန်းသောသတ္တ၀ါ လူပျံတော် Mothman
ထူးဆန်းသောသတ္တ၀ါ လူပျံတော် Mothman
Mothman ဆိုတာဟာ အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့အကောင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၁၉၆၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ မှ ၁၉၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ အတွင်းမှာ အနောက် ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဧရိယာတစ်ဝှိုက်မှာ မြင်တွေ့ ခဲ့ ရတယ်လို့ အစီရင်ခံစာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ စာရေးသူ John Keel သူ့ရဲ့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ ထုတ် လုပ်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ The Mothman Prophecies ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ဒီလူပျံတော်အကောင်တွေဟာ သဘာဝ အလျှောက်ထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ နေရာဒေသတွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ် ရုပ်ရှင်တွေမှာ Keel ရဲ့စာအုပ်တွေကိုအခြေခံပြီး Mothman Prophecies ဆိုပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့တယ် ။
၁၉၉၆ ခုနှစ်ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာပေါ့ ။ Point Pleasant မှ ငယ်ရွယ်တဲ့ စုံတွဲနှစ်တွဲဖြစ်တဲ့ Roger နဲ့ Linda Scarberry ၊ Steve နဲ့ Mary Mallette တို့ဟာ သူတို့ဟာ အဖြူရောင်ထူးဆန်းတဲ့ သတ္တ၀ါကြီးကို မြင်ခဲ့ရကြောင်း ရဲတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအဖြူကောင်တွေရဲ့ မျက်လုံးဟာ နီရဲတောက်ပနေပြီး ကားမီးထိုး လိုက်တဲ့အခါ ပိုပြီးထင်ရှားတောက်ပလာတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ သူတို့က ခြေဆယ်ချောင်းနဲ့ အတောင်ပံပါပျံသန်းနေသော လူသား လို့ဖော်ပြခဲ့ကြတယ် ။ အဲဒီအကောင်ကြီးဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လက်နက်ဒဏ် သင့်အပင်တွေ ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ TNT လို့ခေါ်တဲ့မြို့ဧရိယာ ကို ကားဖြတ်မောင်းလာ စဉ်အနောက် ကနေ တောက်လျှောက် လိုက်လာခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုး ကိုထပ်တူမြင်ခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုတဲ့ လူတွေ ရှိလာပြန်ပါတယ် ။ အဲဒီထဲမှာ စေတနာရှင် မီးသတ်သမား၂ ယောက်လည်းပါပါတယ် ။ သူတို့ကတော့ အဒါကို အနီရောင်မျက်လုံးတဲ့ ကြီးမားတဲ့ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ Mason ပြည်နယ်မှ Sheriff George Johnson ကတော့ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ် ။ ` အခုတလော လူတွေ ပြောနေတဲ့ ထူးဆန်တဲ့ သတ္တ၀ါကောင် ကြီးဆိုတာ shitepoke လို့ခေါ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ Heron - ငဟစ်ငှက်ကြီး တစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ´ Contractor Newell Partridge က သူလည်းပဲ လယ်ကွင်းနားမှာ အနီရောင်မျက် လုံးတွေနဲ့စူးရှတောက်ပတဲ့ ( ဆိုင်ကယ်မီးလိုမျိုး) မျက်လုံးတွေနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အကောင်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ဖူးကြောင်း Johnson ကိုပြောခဲ့ပါတယ် ။
သူက ဆက်ပြောခဲ့တာကတော့ အဲဒီကောင်ကြီးတွေ့ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက် သူ့ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဟာ ဆူညံတဲ့အ သံတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီး ဂျာမန် Shepherd ခွေးတစ်ကောင် လည်းပျောက်ဆုံး သွားကြောင်းပြော ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ West Virginia Univeristy မှ တောတွင်းတိရိစ္ဆာန်လေ့လာရေး ဇီဝပညာရှင် က သတင်းထောက်တွေ ကိုပြောခဲ့ တာကတော့ ဒီလို ဖော်ပြချက်တွေနဲ့ မြင်ကွင်းတွေဟာ Sandhill Crane နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ Sandhill Crane ဆိုတာ အမေရိကန် ကြိုးကြာနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး လူတစ်ရပ်လောက်မြင့်ပါတယ် ။ ခြေချောင်း ၇ ချောင်း ရှိပြီးတောင်ပံတွေပါပါတယ် ။ အနီရောင်မျက်လုံးတွေကလည်း ၀ိုင်းစက်နေပြီး အဲဒီငှက်တွေဟာ အသား စား သတ္တ၀ါမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ ၁၉၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ လူပေါင်း ၄၆ ယောက် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ Silver Bridge ပြိုပျက်မှုမှာ ဒီ သတ္တ၀ါကြီးဟာ အဓိက တရားခံအဖြစ်ပါ ၀င်ပြီး တဲ့နောက် နောက်ထပ် report တွေထွက်မလာခဲ့တော့ပါဘူး ။
Silver Bridge ပေါ်မှ Mothman
ဒီတံတားကြီးပျက်ဆီးမှုနဲ့ ဒီအကောင်ကြီး ထွက်ပေါ်လာမှု ဟာ ဆက်နွယ်မှုရှိနေတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အား လုံးငြင်း လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး .။ တချို့လည်း ဒီလူပျံတော်ဟာ ပန်းကန်ပြားပျံ UFO တွေ ကမ္ဘာကို ရောက် ရှိလာ တာ နဲ့ ပတ်သတ်နေရမယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဘာပဲပြောပြော ဒီလူပျံတော် Mothman ဟာ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် နဲ့ ပုစ္ဆာပေါင်း များစွာ ပေးနေတုန်းပါပဲ ။
Ref : wikipeida
Posted by သက်တန့်ချို at 11:17 AM
မိုးနှင်းပွင်. September 16, 2011 at 12:00 PM
လွမ်းနေခွင့် September 16, 2011 at 2:07 PM
ရန်လိုနေတဲ့ပုံကြီးပဲ..... လူမဟုတ် ဌက်မဟုတ်နဲ့...ကြောက်စရာကြီး...
Anonymous September 16, 2011 at 3:06 PM
တွေ့မှမတွေ့ဖူးသေးပဲလေ တွေ့ရင်သေးတွေပါထွက်ကုန်မလားမသိ အခုတော့မကြောက်ပေါင်
မိုးယံ September 16, 2011 at 3:07 PM
ဦးအောင်မြင့်တို့ ဦးသိန်းဌေးတို့ မြင်ရင် ဒီကောင့်ကို အမှုန့်လုပ်ပစ်လိုက်လိမ့်မယ်...ညှင်း ငှင်း ငွှင်း ဟွှင်း။
AH September 16, 2011 at 3:27 PM
ထူးတော့ ထူးဆန်းတယ်နော် အကို... :)
မဒမ်ကိုး September 16, 2011 at 3:35 PM
ကြောက်စရာကြီး ရေနွေးနဲ့ဖျောပြီး အကျွတ်ကြော်လိုက်
ဒါမှမဟုတ် စပါးလင်နဲ့အုပ်ပြီးချက်းစားလိုက်း)
မြသွေးနီ September 16, 2011 at 4:52 PM
မိုးမြင့်တိမ် September 18, 2011 at 9:19 AM
ထူးဆန်းသလို စိတ်ဝင်စားစရာလဲ ကောင်းတယ်။
အလင်းသစ် September 19, 2011 at 1:38 AM
ခြေထောက်တွေက အများကြီးဆိုတော့ ပြေးရင် ခလုပ်တိုက်နေမှာပဲနော်။။ ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး။။။
Anonymous September 19, 2011 at 7:04 AM
I can truly say that I have never read so much useful information about Blogger: သက်တန့်ချို..... - PostaComment. I want to express my gratitude to the webmaster of www.thettantcho.com.
သူတို့ လိုမျိုးလူပျံတော်ဖြစ်ပြီးပျံတတ်ရင်သိပ်ကောင်းမှာဘဲ..ချစ်သူရှိရာရောက်အောင်ပျံဖို့ ...
Anonymous February 1, 2012 at 1:48 PM
Anonymous June 6, 2012 at 8:39 PM
wholesale replica watches i do replica watches replica watches oris replica watches review iwc pilot replica watches hamilton replica watches genuine swiss made replica watches [url=http://brandreplicawatches.org/Roger-Dubuis/watches/replica/]replica omega watches[/url] cheap watches replica replica oversized watches replica seiko watches
ကဗျာ ချစ်သူ များအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါကြောင်း
ဧရာဝတီမြစ်နှင့်မြစ်ဆုံသည် Market မဟုတ်ပါ
ဖျားနာနေသော ဧရာဝတီကို ၀ိုင်းဝန်းကုစားကြဖို့ ( အပို...
ကလိုရိုဖီးလ် (သို့) Green Healer
တစ်လအတွင်း အမြန်ပိန်စေနည်း၏ လှို့ဝှက်ချက်များ
ART (အေအာတီ) အကြောင်းသိကောင်းစရာ (အပိုင်း ၁)
သားအိမ်အသားလုံး Myoma/Fibroid အကြောင်း
blogger ဆိုတာ ဘာလဲ (တဂ်ပြီ)